“Waa Inaan Sida Ugu Macquulsan Ula Soo Wareegnaa Lukaku” | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Maxaa Cusub » “Waa Inaan Sida Ugu Macquulsan Ula Soo Wareegnaa Lukaku”
“Waa Inaan Sida Ugu Macquulsan Ula Soo Wareegnaa Lukaku”	Waxaa Qoray: Abbas Ali Hassan Taariikh: 15-April-2017
West Ham madaxweyne ku xigeenkeeda Karren Brady ayaa shaaca ka qaaday in ay doonayaan sida ugu macquulka san in ay ula soo wareegaan dheymanka kooxda Evertoon ee Lukaku kaasoo haatan kooxda guulal muhiim ah ku hogaaminayya.
Lukaku ayaa hore u shaaciyey in uu heshiis cusub qalinka ugu duugi doonin kooxda uu haatan ku suganyahay ee Evertoon balse aan baahinin in uu ka tagayo kooxda sidoo kale 23-sano jirkan ayaa laga dahwrayaa goaanka uu qaadan doono markii uu idlaado xili ciyaareydkan.
xidigan reer Belgium ayaa labo gool u dhaliyay kulankii Evertoon ay 4-2 kaga adkaatay Leicester todobaadkii lasoo dhaaday kaasoo ay uga dhigantahay in uu waqti wacan ku qaadanayo kooxda kuna jiro xidigaha ugu gool dhalinta badan horyaalka xili ciyaareydkan kaasoo 23-jeer shabaqa soo taabtay.
“Romelu Lukaku waa xidig heer sare ah waana mid ku wanaagsan ka ciyaarista weerarka dhaxe waana mid wax walbo laga dilan kari” Brady ayaa ugu waramay the Sun.
“weeraryahanda oo dhan waxaa ay jecelyihiin in ay u ciyaaraan sida xidiga Evertoon oo kale sida Jamie Vardy, Harry Kane iyo Zlatan Ibrahimovic.”
“waxaan isku daynay in aan lasoo wareegno labo jeer base haatan wuxuu doonayaa koox ciyaarta tartanka Champions league.”
“lama ilaawi karo xirfadiisa balse waxaa uu jecelyahay koox koox magac weyn leh oo joojin karta kooxaha ka horyimaada”.
Brady hadalkiisa ayaa ahaa mid uu kusoo celcelinayey in ay ka goantahay lasoo wareegitaanka xidiga reer Belgium lukaku waxeyna rajeynayaan in ay kooxda mar uun soo tiigsan doonto kaalmaha sare ee horyalka si ay uga mid noqoto kooxaha tartamda qaarada yurub ka qeyb gala.